Nri oriri kwesịrị ekwesị dịka onye inyeaka nye ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma
Ugboro ole ka ị na-eri na ole maka nri kwesịrị ekwesị?
A na-ekwe ka mmezi ahụ dị ụtọ
Ngwakọta dị mma maka nri kwesịrị ekwesị na-agụnye ihe nguzo ziri ezi nke ihe oriri anụ ọhịa na osisi. Ihe kachasị na-emepụta ume na-emekarị nke carbohydrates (50-55 percent) dị ka ọka, akwụkwọ nri, poteto na mkpụrụ osisi.
Naanị obere oke nke abụba (ihe kachasị 30 percent) sitere na abụba na mmanụ na ihe ntinye na protein (10-15 percent) dị mkpa.
Ọ bụrụ na a na-emezi ihe ziri ezi ebe a, a na-elekọta nwa ahụ nke ọma ma ọ dịghị mkpa ihe ọ bụla.
Kedu ka esi amata ihe na-edozi ahụ?
Nwatakịrị ahụ na-eri otu akụkụ, dịka onye anaghị eri anụ, na-enweghị mmiri ara ehi, na anụ dị oke, na sweets na pastries ma ọ bụ ọtụtụ sweets, mgbe ahụ, enweghi abụba abụba, ihe ndị na-emepụta ihe na vitamin nwere ike idozi.
Ọ bụrụ na a na-ahọrọ otu ekpomeekpo, dịka ọmụmaatụ nnu, ụtọ, utoojoo, nke a na-eme ka ahụ dị ụtọ. Ya mere, ọ dị mkpa ka ụmụ na-eri nri dịkarịa ala karịa nri ọ bụla.
Nri zuru oke na ezigbo nri na-eme ka nri nri 3-5 na ụbọchị dum. Ọ dịkarịa ala otu nri ọkụ kwesịrị ịgụnye. Ọfọn, afọ na-eche mgbe agụụ anaghị ebili.
Dị ka nri, ị nwere ike ịnụ ụtọ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, ụfọdụ nri ma ọ bụ ihe oriri. A na-atụ aro nri nduku ọkụ, osikapa aja, pasta, akwụkwọ nri ma ọ bụ salad. A na - enye obere azụ na anụ n'akụkụ efere. Dị ka ihe ọṅụṅụ, mmiri, mkpụrụ osisi na herbal tii bụ ọnụ ala. A ghaghị izere shuga na-aṅụ mmiri, dị ka mkpụrụ osisi na-amị mkpụrụ nwere ọdịnaya shuga nke 10 percent.
Mmiri ara ehi nwere ọtụtụ ihe dị mkpa dị mkpa. Dị ka calcium, phosphorus, protin, zinc, iodine na vitamin B2 na B1, nke kachasị mkpa n'uto ahụ. Ọ bụrụ na enwere ahụ ara ehi, jụọ onye na-edozi ahụ.
Vitamin maka ụmụaka
Iri bụ ihe gbasara ọdịdị
Ọtụtụ mgbe, ndị okenye na-eri ihe oriri nwa ha dị ka nri ha si eri. Ya mere a ghaghi ilezi anya ka o ghara inye umuaka ogo.
Ahụ na-emekarị ihe ọ chọrọ. Ọ bụ ihe dị mma ka ụmụaka ghara iri otu ihe ahụ kwa ụbọchị. Dabere na afọ, ụdị nke ahụ, ahụ na arụ ọrụ anụ ahụ, a ga-edozi ihe oriri n'otu n'otu.
A na-ejupụta anụ na abụba buru ibu dị jụụ na ụmụ obere ụmụaka, ma kama achọrọ nri dị ọkụ, ebe ọ bụ na ha nwere ike ijikwa nke a. A na-ekesa akwụkwọ nri ndị dị na mbụ na nri na-ekpo ọkụ na obere obere ụbọchị.
Iwu nwere ike ịgba ume
Achịcha nri ole na ole dị mkpa iji mee ka obi gị dị mma. N'ihi na mgbaze ahụ siri ike malitere na mbido mbụ. Maka iri nri anyị mkpa karịa oge niile na ezumike. Ya mere, nkwụsịtụ dị mkpirikpi tupu na mgbe nri dị mkpa. A ghaghị izere ihe ndị dịka redio, TV, ịgụ ma ọ bụ mkparịta ụka nwere mkpali. Dịkwa ka ndị buru ibu: "Anya na-eri ya."
Mmasị maka uto uto nwere ike ịbụ nke a, n'ihi na ọbụna mmiri ara nne na-atọ ụtọ.
Ezi mma na-enweghị mwute
Akwụsịtụ ọka breeze zuru ezu ga-esiri ike ịmanye. Ọbụna Pyramid Na-enye nri na-enye ebe a n'okpuru isiokwu "Extras", otu ìgwè nri ndị a kwadoro.
Achịchaghị ihe eji edozi akwa. Otú ọ dị, Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nutrition Ụmụaka (FKE) na-atụ aro na ị gaghị ewere ihe karịrị 10 pasent nke ihe oriri ike kwa ụbọchị n'ụdị "mgbakwunye". Dịka ọmụmaatụ, maka ụmụaka 7-9, ndị a dị gburugburu 180 kcal ma ọ bụ banyere 45 grams shuga ma ọ bụ 20 grams nke abụba.
Ịnọdụ - Ịkwa akwa igwe
Nri oriri na-edozi ahụ nke ụmụaka
Nri Protein | nri
Punch n'oge okpomọkụ | Nri oriri
Inyeghị nkwụsị nke Lactose | Nlekọta ahụ ike
Mmanya | Nri na ihe ọṅụṅụ
Nri Nri | Ahụike nri
Ihe nchịkọta nri | Nri & Nri